निःशुल्क सीपमुलक तालिम लिन चाहनुहुन्छ ? आवेदन दिनुहोस् | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
निःशुल्क सीपमुलक तालिम लिन चाहनुहुन्छ ? आवेदन दिनुहोस्
पुस २८, २०७६ सोमबार १७:१७:१० | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डौ – तपाईं सीपमुलक तालिम लिन चाहनुहुन्छ, तर पैसा छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस् । सरकारले एक हजारभन्दा बढीलाई निःशुल्क सीपमुलक तालिम दिने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानले विभिन्न ७ विधामा १२ सय ४० जनालाई तालिम दिन लागेको हो । मोबाइल फोन मर्मत, मेशन, पलम्बर, वेटर वेट्रेस, कार्पेन्टर, हाउस किपिङ र कुकको लागि तालिम दिइने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानकाअनुसार झापा, काठमाण्डौ, रुपन्देही र सुर्खेतमा १ सय २० जनाको लागि मोबाइल मर्मतको तालिम दिइनेछ । यस्तै उदयपुर र दाङमा मेशन अर्थात मिस्त्री (घर निर्माणको)को लागि एकसय जना, झापा र सर्लाहीमा कार्पेन्टरको लागि एकसय जना, काठमाण्डौ र चितवनमा वेटर/वेट्रेसको लागि १ सय ८० जनालाई तालिम दिइनेछ ।
उदयपुर, बारा, भक्तपुर, काठमाण्डौ र बाँकेमा दुई सय जनाको लागि प्लम्बरको तालिम दिइनेछ । सुनसरी, काठमाण्डौ, चितवन, कास्की र रुपन्देहीमा २ सय ८० जनाको लागि हाउस किपिङको तालिम सञ्चालन हुनेछ ।
यस्तै सुनसरी, काठमाण्डौ, रुपन्देही र कैलालीमा २ सय ६० जनाको लागि कुकको तालिम सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । मेसन र कार्पेन्टरको लागि न्यूनतम योग्यता पाँच कक्षा र अरु सबै तालिमको लागि आठ कक्षा तोकिएको छ ।
तालिम लिन चाहनेले नेपाली नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि सहित माघको १३ गतेभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । अन्तवार्ता गरेर तालिमको लागि छनोट गरिने र तोकिएको ठाउँमा माघ २० गतेदेखि तालिम दिइनेछ ।
१८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले तालिममा सहभागी हुन सक्नेछन् । एकल महिला, अपाङ्गता भएका तथा द्वन्द्व पीडितको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।
तालिम हुने जिल्लाका तोकिएका तालिम प्रदायक संस्थाले तालिम सञ्चालन गर्नेछन् ।
Shiba hari khatiwada
Jan. 16, 2020, 8:48 p.m.
I am interested in waiter
Jan. 15, 2020, 8:10 a.m.
चित्तललाई थापेकाे पासाेमा बाघ मरेपछि बर्दिया निकुञ्जमा सुरक्ष...
नेपाल एअरलाइन्सले भन्याे, ‘स्वदेशी पाइलटलाई कम र विदेशी पाइल...
बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डबारे अध्ययन गर्न संसदीय समितिकाे नि...
कालोबजारी गर्ने २६ पसललाई कारबाही गर्न काठमाण्डाै महानगरको स...
संसद्को विशेष अधिवेशन बाेलाउन सरकारसँग माग गर्छाैँ : कांग्रेस
प्रधानसेनापति थापाकाे पीसीआर रिपाेर्ट नेगेटिभ
राष्ट्रिय भिटामिन 'ए' कार्यक्रम आउँदो मङ्सिरमा सञ्चालन हुने
५ दिनदेखि बन्द रिडी–रुद्रवेणी सडक अझै खुलेन
आईएमई पे र लालबन्दी खानेपानीबीच सम्झौता, ६ हजार ५१४ घरधुरी ...
बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्ति र निकायलाई पनि कारबाह...
भोलिदेखि सुपथ मूल्य पसल खोल्दै सरकार, यस्तो छ खाद्य वस्तुको मूल्य
‘आइसाेलेशन अवधिलाई रचनात्मक र रमाइलाे बनाउनुस्’
अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव : ट्रम्प र बाइडेनबीच चर्काचर्की
निर्मला पन्त प्रकरणकाे निष्कर्षमा छिटो पुग्ने गरी अनुसन्धान भइरह...
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक हाकिरहेकी एक्ली महिला बैंकर